Fepetra fampiasana - Infinite-electronic
Address:17F, trano fandraisam-bahiny Gaylord, 114-118 Roadhart Lockhart, Wan Chai, Hong Kong
Ity fifanarahana ity dia manazava ny fepetran'ny www. Infinite-Electronic.hk, raha manana fanontaniana ianao, azafady mba te hifandray aminay!
Azafady vakio amim-pitandremana ity fe-potoana fampiasana sy fanambarana manokana ity alohan'ny hidiranao ao amin'ny Infinite-Electronic.hk .once nahasoratra tamim-pahombiazana ianao, ny menasanao novakianao, nanaiky ary nanaiky ny fepetra rehetra mifandraika amin'ny fampiasana sy ny fanambarana manokana. dia hamoaka version vaovao amin'ny Infinite-Electronic.hk izahay, raha nanova ity fanambarana ity izahay. ny votoatin'ny fifanarahana rehetra dia hanan-kery amin'ny daty famoahana azy. Raha tsy manaiky ity fanitsiana ity ianao, dia tsy maintsy mamarana ny fifandraisana amin'ny Infinite-Electronic.hk ianao.
1), Mpanjifa Mpanjifa:
Ny mpampiasa Infinite-Electronic.hk dia tokony ho orinasa na olon-tsotra afaka manasonia fifanekena ara-dalàna momba ny lalàna mifanaraka amin'ny lalàna. Azafady, aza mampiasa ny tolotrtsika raha tsy mahafeno fepetra. Tsy afaka mandefitra na mivarotra ny kaonty Infinite-Electronic.hk ianao. Infinite-Electronic.hk dia manana zo hanakana na hamarana ny kaontinao araka izay tiany.
2), fanoratana an-tsoratra:
Ny mpampiasa rehetra dia tokony hanome ny mombamomba ny tena manokana sy marina momba ny COMPONENTS-CENTER.COM, mba hahazoana antoka fa ara-dalàna ny raharaham-barotra. Raha misy fiovana, azafady mampahafantatra sy manavao amin'ny Infinite-Electronic.hk avy hatrany.
Ny mpampiasa Infinite-Electronic.hk dia manaiky hanaiky email sy hafatra avy amin'ny Infinite-Electronic.hk na Infinite-Electronic.hk.
Ny Infinite-Electronic.hk dia manana fanambarana manokana momba ny tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa rehetra, anisan'izany ny fifanarahana fampiasa. Tokony hamaky sy hanaiky ny fanambarana manokana momba ny fanambarana hampiasana Infinite-Electronic.hk ianao rehefa misoratra anarana, ary ianao dia iharan'ny faneriterena amin'ny fitsipika (sy Infinite-Electronic.hk misy fanambarana ofisialy momba ny fiainana manokana) mandritra ny vanim-potoanan'ny mpampiasa Infinite-Electronic.hk.
1), alohan'ny hahazoanao fankatoavana, momba ny fampahalalana momba ny angon-drakitra rehetra, ny tena anarany, ny adiresy, ny adiresy mailaka, ny fampahafantarana amin'ny contact..etc. Infinite-Electronic.hk dia tsy ampiasaina amin'ny tanjona hafa.
2), Ampiasao ny fampahalalana tsy miankina. Infinite-Electronic.hk dia hanangona ny mombamomba ny olona manokana amin'ny alàlan'ny adiresy IP, anisan'izany ny tranonkala Browser, ny karazana rafitra miasa, ny anaran'ny nomerao ISP izay manome tolotra fidirana, sns. Mba hanatsarana ny pejy fanoratana. Infinite-Electronic.hk ihany koa dia manome ny antontan'isan'ny mpampiasa sy manatsara ny fitantanana sy ny serivisy amin'ny fanangonana ireo fampahalalana etsy ambony.
3), fiarovana ny angona manokana. Infinite-Electronic.hk dia hiaro ny fampahalalam-baovao manokana anao amin'ny alàlan'ny fitaovam-pifandraisana azo antoka amin'ny serivisy.
4), famoahana angona manokana sy fameperana. Ny Infinite-Electronic.hk dia hanome fanazavana manokana momba ny angona araka ny fangatahan'ny orinasam-panjakana na ny fijerena ny tanjon'ny fiarovana ny daholobe, rehefa manontany Infinite-Electronic.hk ny governemanta mba hampahafantarana ny angona angon-drakitra manokana araka ny fepetra araka ny lalàna. Infinite-Electronic.hk dia tsy mandray andraikitra amin'ny toe-javatra toy izany. Raha mahafeno ireto fepetra manaraka ireto ny Infinite-Electronic.hk dia hampiasa ny mombamomba azy manokana mihoatra ny ilàna azy: Efa nahazo ny fankatoavanareo izahay, ny lalàna sy ny fomba mifanaraka amin'izany dia mangataka Infinite-Electronic.hk mba hanome ny fampahalalana ny mpampiasa.
Ny mpampiasa rehetra rehefa mividy dia tsy maintsy manaraka ny fepetra manaraka:
1), ny mpampiasa dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna rehetra, lalàna, fitsipika ary lalàna any an-toerana rehefa ampiasaina sy mividy Infinite-Electronic.hk. Ilainao koa ny mijery ny fepetra fampiasana sy fanambarana momba ny fiainana manokana, anisan'izany ny fepetra rehetra sy ny fitsipika arahin'antoka ambony.
2), Voatery hameno ny fifanarahana amin'ny Infinite-Electronic.hk ianao rehefa mividy, afa-tsy amin'ny orinasa voarara amin'ny fampiasana sy lalàna. Raha vao mandidy ny baiko ianao, dia manaiky ny fepetra sy ny fepetra voafaritra amin'ny fanoritsoritana ny entana, raha toa ka ara-dalàna io fepetra ara-barotra io ary eo ambanin'ny fifanarahana.
3), Ny lisitry ny dokam-barotra, ny lisitra vidiny ary ny fanambarana ao amin'ny Infinite-Electronic.hk dia tsy tolotra. Azontsika atao ny mahatsiaro ny fampahalalam-baovao avy amin'ny iray, rehefa mahita ny laharan-tariby ny Infinite-Electronic.hk ary mazava ho azy fa diso na tsy misy tahiry. Infinite-Electronic.hk dia miaro ny zon'ny mividy ny famerana ny kisary. Rehefa mametraka baiko ianao dia ekeny fa ianao dia eo amin'ny vanim-potoana ara-dalàna hividianana ireo entana ireo, ary tompon'andraikitra amin'ny maha-azo itokiana ny fampahalalana rehetra omenao ao amin'ny baiko.
4), Ny vidin'ny vokatra sy ny fampahafantarana dia voalaza ao amin'ny tranokala. Ity karazana fampahalalana ity dia havaozina na oviana na oviana tsy misy fampahafantarana. Ny fametrahana ny entana an-tsompitra dia hiankina amin'ny fomba samihafa araka ny fomba amam-pandefasanao samihafa. Raha misy loza, ohatra ny mpamatsy vola, fiovana VAT, na rafitra rafitra Infinite-Electronic.hk, ny antony rehetra dia hamerenana handoavana ny vidiny aorian'ny fanamafisana ny baiko, Infinite-Electronic.hk dia mandefa mailaka na miantso hampahafantarana izany vaovao izany, afaka manapa-kevitra ianao raha hanafoana ny baiko sa tsia.
4, QUALITY AND SERVICE AFTER SALE:
1), Jereo ny serivisy taorian'ny fivarotana.
2), Ny kalitaon'ny vokatra.
Ny vokatra Infinite-Electronic.hk dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny governemanta sy ny matihanina. Raha tsy nisy ny fenitra teo aloha, dia hanao araka ny fenitry ny mpanamboatra, raha tsy misy ireo fenitra voalaza etsy ambony, ny mpanjifa dia afaka mifanakalo hevitra momba ny Infinite-Electronic.hk. Ny olan'ny kalita na ny fenitry ny vokatra, ny mpampiasa dia afaka mangataka ny hamerenana na hanoloana.
Hanaiky ianao fa tsy afaka miditra ao amin'ny tranonkala amin'ny karazana robot rehetra, Spider na Refresh rindrambaiko ho an'ny tanjona rehetra raha tsy nahazoan-dalana Infinite-Electronic.hk tamin'ny taratasy fanoratana.
Fanampin'izany, manaiky ianao fa tsy izany:
1), Ny fihetsika tsy mendrika sy tsy misy fihetsika izay afaka mandresy ny vohikala Infinite-Electronic.hk amin'ny (Ny Infinite-Electronic.hk fahamendrehana dia mamaritra).
2), tsy manoratra ny fahazoan-dàlana avy amin'ny Infinite-Electronic.hk, miova, kopia, mandefitra, manamboatra asa, mizara na miresaka amin'ny Website (afa-tsy ny fampahafantarana manokana anao).
3), Manakana na manandrana manakana ny tranokalam-pandaminana ara-dalàna na fanodinana ny asa ao amin'ny tranonkala.
4), Ampiasao ny votoaty voarara noho ny lalàna sy fitsipika mifandraika amin'izany.
5), Ampiasao ny virosy rehetra, ny soavaly Trojan, ny virosin'ny kankana, ny timebomb, ny fanesorana bots, ny pasitera Pakistane, ny spyware na ny programa hafa amin'ny computer izay mety manimba, manavao, mamafa, manimba, miafina miafina, fifanarahana na mandray amin'ny fampiasana rafitra, data na fampahalalana manokana.
Ny zon'ny mpamorona, ny patanty, ny marika, ny tsiambaratelo ara-barotra ary ny zo rehetra omen'ny Infinite-Electronic.hk dia an'i Infinite-Electronic.hk avokoa. Raha tsy nahazoan-dalana ny Infinite-Electronic.hk, na iza na iza mpikambana dia afaka omeo download, kopia, mandefa, mamerina, ary manova. Raha tsy izany dia hitondra ny andraikitra ara-dalàna rehetra. Ny Infinite-Electronic.hk dia manana zo hamerina ny servera data an'ny Infinite-Electronic.hk rehefa mampiasa ny serivisy ny mpampiasa.
Infinite-Electronic.hk dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fanohanana ara-teknika ny vohikala amin'ny asan'ny serasera, Miezaka ny manapaka ny serivisy, na ny fe-potoana maimaim-poana ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, azafady fa azon'ilay mpampiasa atao ny mijery Internet. Saingy noho ny hamafin'ny herim-po na antony hafa tsy ahafahana mifehy azy, mamono ilay tranokala na tsy afaka mampiasa azy, dia miteraka firaketana, hafatra na vaovao very, Infinite-Electronic.hk dia tsy tompon'andraikitra: ary ny mpampiasa rehetra dia manome valiny diso na tsy tanteraka na diso. Tsy afaka mampiasa ny Infinite-Electronic.hk na tsy mety mamoy ny hafa, Infinite-Electronic.hk dia tsy tompon'andraikitra.
Ity fifanarahana amin'ny lafiny rehetra ity dia tarihin'ny lalàna ao Hong Kong. Ity tranonkala ity dia mpampiasa avokoa ny mpampiasa rehetra Infinite-Electronic.hk izay hita eo ambany fiahian'ny fitsarana sy ny fitsarana ambony. Ny fepetra voalazan'ity fifanarahana ity dia azo alefa, Raha misy fepetra voalaza fa tsy manan-kery na tsy misy fepetra, dia azo alaina ny fepetra ary ny fepetra sisa dia hovonoina.